Kaniisadda, Kaniisadda Adduunka ee Adduunka Switzerland (WKG)
Markii Albert Einstein uu daabacay aragtidiisa guud ee wada-noolaanshaha sanadkii 1916, wuxuu weligii beddelay adduunka sayniska. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu waawaynaa ee soosaaray wuxuu heshiis la galay fiditaanka joogtada ah ee adduunka. Xaqiiqadan la yaabka leh waxay ina xusuusineysaa kaliya ma aha ee aduunku weyn yahay, laakiin sidoo kale bayaan uu abwaanku leeyahay: - Sababta oo ah cirka oo uu dhulka ka sarreeyo, wuxuu nimcadiisa ku muujiyaa kuwa isaga ka cabsada. Ilaa iyo subaxda markay ka soo baxdo fiidkii, waxay noo oggolaanaysaa inaan noqonno xadgudubyadeenna » (Sabuurradii 103,11: 12).
Haa, nimcada Ilaah waa mid cajiib ah oo macquul ah sababtoo ah allabari wiilkiisa keliya, Rabbigeenna Ciise. Qaab-dhismeedka sabuuradda "Illaa barigu waa ka galbeed" Sidaas darteed, qofna ma qiyaasi karo ilaa heerka madaxfurashadayada ee Masiixa, gaar ahaan tixgelinteeda ay ku jirto. Dembiyadeenna ayaa naga fogeeya Ilaah. Laakiin dhimashadii Masiixa ee iskutallaabta dusheeda wax walba way beddeleen. Farqiga u dhexeeya Ilaah iyo annaga waa xiran yahay. Ilaah duniduu la heshiiyey isaga qudhiisa Masiixa.
Waxaa nalagu casuumay inaan ku biirno wehelnimadiisa qoys ahaan, xiriirka kaamil ahaanta ah ee leh Saddexnimada Ilaaha weligiis ah. Isagu wuxuu inoo soo diraa Ruuxa Quduuska ah si uu nooga caawiyo inaan isaga u dhowaanno oo aan nolosheenna hoos gelinno isaga si aan u noqon karno Masiixa.